नेपाल गरिब छ तर अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली – Khabarhouse
नेपाल गरिब छ तर अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
Khabar house | ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:५८ | Comments
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षे अवधीमा भएका उपलब्धिबारे प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका छन्। शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै केही तर्कहरुले आफू बिस्मात हुने बताएका छन्। ‘पहिले सरकारको चर्चा गर्दा गफ गरेर हुन्छ काम गर्नु पर्‍यो नि गर्छु भनेर हुन्छ भनेको सुन्थे। अहिले परिवेश अलि बदिलिएछ। यो एक वर्षदेखि एउटा थेगो जस्तै बनेको छ।
अंक र आँकडाबाट हुन्छ? ग्लोबल इन्डेक्समा होइन जनतामा इम्प्रिेसन के छ? बुझ् भन्ने जस्ता कुराहरु सुनिन्छि। यस्ता तर्क सुन्दा म बेलाबेलामा विस्मित हुन्छु। मरौं कि जस्तो पनि लाग्छ। तर ठिकै छ अंकमा होइन अनुभुति नै सही इन्डेक्स होइन इम्प्रेसन कै कुरा गरौं न त। के छ इम्प्रेसन, परिणाम के छ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘यो सरकार गठन हुनुअघि तराई र हिमाली जिल्लाहरुमा शीतलहरका कारण जनताले ज्यान गुमाइरहेका थिए।
तर दुई वर्ष यता कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन्। नेपाल गरिब छ तर भोकमरीको अन्त्य भयो। अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन्।’ उनले भने ‘आम निर्वाचनमा एउटा चलेको थियो कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन। यसलाई खुब दोहोर्याएको पाइयो। वास्तविकता त्यस्तो थिएन। तर लोकतन्त्र संकटमा परेको अधिनायकवाद आउन लागेको भन्ने पनि खुबै भनियो।
यहाँनेर अचेल एउटा प्रश्नले हरदम पिरोल्छ मलाई। उमेरले पनि पाको भइसक्यौं। गत वर्ष मैले भनेको थिए। सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। आजको प्रश्न सम्वृद्धि कति भयो ? सुखी बनाउने योजना कहाँ पुग्यो?’ राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिँदै मातृभूमिको रक्षा गर्ने उनले बताए । ‘सीमा वि’वादमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ ।